Oziọma nke ụbọchị Jenụwarị 20, 2021 na nkọwa nke Pope Francis | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Oziọma nke Jenụwarị 20, 2021 na nkọwa nke Pope Francis
Hib 7,1: 3.15-17-XNUMX
Mụnna m, Melkizedek, eze nke Salem, onye-nchu-aja nke Chineke Nke kachasi ihe nile elu, jekwuru Abraham mb hee o siri na ndi-eze meriri la, we gọzie ya; onye ahu ka Abraham nyere otù uzọ n'uzọ iri nke ihe nile.
Nke mbu, aha ya putara “eze ikpe”; mgbe ahụ ọ bụkwa eze Salem, nke ahụ bụ "eze udo". Ya onwe-ya, onye n fathernweghi nna, n withoutnweghi nne, n withoutnweghi osuso-ọmumu, n beginningnweghi mmalite nke ubọchi ma-ọbu nsọtu nke ndu, nke emere dika Ọkpara Chineke, bu onye-nchu-àjà rue mb forevere ebighi-ebi.
[Ugbu a,] na-ebili, n'ọdịdị nke Melchisedek, onye nchụàjà dị iche, onye na-adịghị dị otú ahụ dịka iwu mmadụ nyere, kama site n'ike nke ndụ a na-apụghị ibibi ebibi. N'ezie, a gbara ya akaebe a:
«Are bụ onye ụkọchukwu ruo mgbe ebighị ebi
Mkp 3,1: 6-XNUMX
N'oge ahụ, Jizọs banyere n'ụlọ nzukọ ọzọ. E nwere otu nwoke nọ ebe ahụ nwere aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, ha ga-ahụ ma ọ ga-agwọ ya n’ụbọchị izu ike ka ha bo ya ebubo.
Ọ gwara nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, sị, "Bilie, bịa n'etiti!" O we jua ha, si: Is ziri ezi n'iwu ime ezi ihe, ma-ọbu ime ihe ọjọ, n'ubọchi-izu-ike, izọputa ndu, ma-ọbu ib killu ya? Ma ha kpuchiri ọnu. Mgbe o lere ha gburugburu n'iwe, o wutere ha maka isi ike nke obi ha, ọ sịrị nwoke ahụ: "Setịpụ aka gị!" O we setipu ya, aka-ya we di nma.
Ndi-Farisi we pua, ngwa ngwa, ha na ndi Herod we b councila ìzù ka ha we b toue Ya.
Olile anya bu onyinye, obu onyinye nke Mo Nso na nke a ka Paul ga-asi: 'Odighi emechu ihu'. Olileanya adighi emechu ihu, n'ihi gini? N'ihi na obu onyinye nke Mo Nso nyere anyi. Ma Pọl na-agwa anyị na olileanya nwere aha. Olile anya bu Jisos, olile anya, n’eme ihe nile ozo. Ọ bụ ọrụ ebube mgbe niile. Ọbụghị naanị na ọ rụrụ ọrụ ebube nke ịgwọ ọrịa, ọtụtụ ihe: ndị ahụ bụ naanị ihe ịrịba ama, ihe ịrịba ama nke ihe ọ na-eme ugbu a, na Nzukọ nsọ. Ọrụ ebube nke ịmegharị ihe niile: ihe ọ na-eme na ndụ m, na ndụ gị, na ndụ anyị. Megharịa. Ihe O na-eme ozo bu kpomkwem ihe kpatara olile anya anyi. Ọ bụ Kraịst na-emegharị ihe niile dị ịtụnanya karịa Okike, ọ bụ ihe kpatara olile anya anyị. Olileanya a adighi-ada mba, n'ihi na O kwesiri ntukwasi obi. Ọ pụghị ịgọnahụ onwe ya. Nke a bụ omume ọma nke olileanya. (Santa Marta - Septemba 9, 2013)